बालबालिकाका लागि जरुरी तीन कुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
बालबालिकाका लागि जरुरी तीन कुराहरु !!
हरेक बच्चाको भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक स्थिरता धेरै हदसम्म अभिभावकसँगको सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ । कुनै पनि बच्चा जति आमाबुबाको नजिक हुन्छन् उनीहरुको व्यक्तित्व त्यति नै सन्तुलित हुन्छ ।
बच्चा तपाईंको कति नजिक छ यस कुरा थाहा पाउनको लागि दुःखी वा चिन्तित भएको अवस्थामा हुने उनीहरु हामीसँग खुलेर कुरा गर्छन वा गर्दैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
उनीहरुले हामीसँग हरेक कुरा सेयर गर्छन् वा गर्दैनन् ? यदि गर्दैनन् भने हामीसँग बच्चासँग हुनुपर्ने जति गहिरो सम्बन्ध छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
यसले क्षणिक रुपमा त उनीहरुलाई सहयोग गरेको जस्तो लाग्नेछ । तर, भविष्यमा उनीहरुलाई परनिर्भर बनाउनेछ । अनलाइनखबर बाट सभार